Maraykanka Oo Khariidad Cusub Oo Uu Soo Saaray Ku Xaqiijiyay Ammaanka Somaliland |
Maraykanka Oo Khariidad Cusub Oo Uu Soo Saaray Ku Xaqiijiyay Ammaanka Somaliland
Dawladda Maraykanka ayaa shalay soo saartay Khariidad cusub oo muujinaysa dalalka ay ka jirto cabsida amni ee aanay muwaadiniinteedu booqan karin iyo dalalka ay booqan karaan ee uu ammaankeedu buuxo.
Khariidada iyo warbixin ay soo saartay wasaaradda khaarajiga ee Maraykanku, waxay ku muujisay oo ay kala saartay Somaliland iyo Somaliya. khariidada waxa ku cad in Somaliland tahay dal amni ah oo ay muwaadiniinteedu booqan karaan, halka Somaliya ay tahay dal colaadeed oo aanay muwaadiniinta Maraykan ahi tagi karin fasaxyadooda dhawaan bilaabmaya.
Dalalka Somaliland ugu soo dhaw ee la booqan karo waxa ka mid ah Djibouti, halka ay dalalka kale ee gobalka Geeska Afrika uu Maraykanku ku tilmaamay dalal aan muwaadiniintiisa amni ahaan lagu aamini karin.
Dalalka kale ee la booqan karo ee bariga Afrika waxa ka mid ah Tansaaniya iyo Yugaandha, halka Suudaan iyo Koonfurta Suudaana ku jiraan dalalka ay ka digeen in la booqdo.
Maraykanku wuxuu sheegay inuu hayo xogo ku saabsan in weeraro argagixiso ka dhici karaan dalalka aanu doonayn in muwaadiniintiisu tagaan, kuwaas oo isugu jira dalal Yurub ka tirsan, Afrika iyo Carabta